February 12, 2019 - खबरम्यागजिन
गणतन्त्रको लागि दलहरू गोलबद्ध : ‘हामी एकार्कामा बाझ्दा सरकारलाई नाफा हुन्छ’
February 12, 2019 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि 0
‘८६ को त्यो मूर्ख जीएनएलएफ र त्यो मूर्ख सीपीएमलाई बिर्साउने हुनुपर्छ। त्यो विदिर्ण इतिहासलाई बिर्साउने राजनीति हुनुपर्छ हाम्रो। अब सभ्य राजनीतिको सुरुवात गरौँ। सुसंस्कृत राजनीतिको कुरा गरौँ। हो, शासक गोष्ठीले हामीलाई यसो गराउँछ। शासक गोष्ठीले […]
सरकारी जमीन किनबेचको कुरा कोर्टमा प्रमाणित गर्न तयार छौँ-सुन्दास
कालेबुङ, 12 फरवरी: कालेबुङमा सरकारी जमीन किनबेच भइरहेको आरोप लगाउँदै माकपा नेता तारा सुन्दासले भूमि सुधार अधिकारी र नगरपालिकामा पत्रचार गरेपनि जवाब नआएको बताएका छन्। उनले सरकारले भेष्ट गरेको जमीन किनबेच भइरहेको सन्दर्भमा जानकारी लिन चाहेको […]
10 वर्षीय सोनु उराँवको मृत्यु अझ रहस्यमय बन्दै: पिताले बयान बद्लिँदै भने, ‘हामीलाई डर देखाएर पुलिसलाई गलत बयान दिन लगाइएको थियो’
कालेबुङ, 12 फरवरी: 10 वर्षीय सोनु उराँवको मृत्युको घटना अझ रहस्यमय बन्दै गएको छ। सोनु उराँवका परिवारले आज पुलिसअघि बयान बल्दिएपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको हो। घटना अनुसार जलपगाइगुढी जिल्ला अन्तर्गत चालसा निवासी सोनु उराँवलाई […]
माध्यमिक परीक्षा आरम्भ: कालेबुङ जिल्लाबाट2हजार 71 जना विदयार्थीहरू परीक्षा दिँदै
कालेबुङ, 12 फरवरी: आजेदेखि पश्चिम बङ्गालभरि नै माध्यमिक परीक्षा शुरू भएको छ। कालेबुङ जिल्लाबाट मोठ2हजार 71 जना विदयार्थीहरूले परीक्षा दिइरहेका छन्। जिल्लाभरिमा मोठ 10 वटा केन्द्रमा परीक्षा सम्पन्न भइरहेको छ। आज पहिलो दिन […]
संवादमा कमजोर समर लभ
छ वर्षअघि बजारमा आएको थियो उपन्यास ‘समर लभ’ । यसले युवापुस्तामाझ उपन्यासकार सुविन भट्टराईलाई मात्रै चिनाएन, युवापुस्तामाझ उपन्यास विधालाई पनि नजिक गरायो । अतीत र सायाको प्रेमकथालाई ठूलो आयतनमा फैलायो । छरितो संवाद, अपनत्व महसुस गर्न सक्ने सामयिक […]
‘भ्यालेन्टाइन्स डे’ कहाँबाट सुरु भयो थाहा छ त ?
हरेक फेब्रुअरी १४ मा युवाहरुमाझ लोकप्रिय रहेको ‘भ्यालेन्टाइन्स डे’ कहाँबाट सुरु भयो थाहा छ त ? कसरी यो चर्चित भयो ? प्रेम वा अनुभुतिको त्याग र वलिदानबाट सुरु भएको यो ऐतिहासिक घटना अचेल त चाड […]
कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माउने सेलिब्रिटीहरू
बलिउडका थुप्रै सेलिब्रिटी सेरोगेसीमार्फत आमाबुबा बनेका छन्। कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माउने विधिलाई सरोगेसी भनिन्छ। कोही बिहे नगरी अभिभावक बनेका छन् भने कतिपय जोडीले यस विधिबाट सन्तानसुख प्राप्त गरेका छन्। आमिर खान अभिनेता आमिर खान […]
मुद्दा र राजनीति भनिन्छ, तत्कालीन चुनाव प्रचारमा पनि कम्पनीको पैसा प्रसस्त मात्रामा खर्च गरिएको थियो । तर जाँच समितिले निष्पक्ष नतिजा निकाल्न सकेन। भ्रष्टाचारको कालो अध्याय समावेश भएको धेरै दस्तावेजहरु रातारात गायब भए। लहरा तान्दा […]
गान्तोक, 12 फरवरी। एउटा कलाकारको प्रारम्भीक जीवनको सङ्घर्षको कथा व्यथालाई सिरियाको नरसंहार र विश्व युद्धको पीडासित मुछेर तयार पारिएको पीड़ादायक अतितलाई द पिपल्स स्टुडियोमा प्रदर्शन गरिएको छ। हिमाली राज्य सिक्किम आफू शान्तिको प्रतिक भएर पनि […]
गान्तोक, 12 फरवरी। सोमबार साँझपख १६ तुमिन लिङ्गी निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत लोवर कम्बल वार्डका जनताले क्षेत्र विधायक तथा सिक्किम सरकारका पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उगेन ग्याछो भोटियालाई दुर्गा मन्दिरमा निमत्याएर भब्य स्वागतका साथ अभिनन्दन […]